Shiinaha Custom boorsadaada soosaarayaasha, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Boorsada dhabarka shiraaca
Boorsada hal-garabka ah
Waxyaabaha la xiriira xayawaanka
Guri > > Bacda xayawaanka > Boorsada xayawaanka
Boorsooyinka duffle ee haweenka
Bacda dhexda dumarka
HUAXIZI Boorsadaan xayawaanku waxay isticmaashaa naqshad dhabarka la ballaarin karo si ay u siiso xayawaankaaga meel nasasho badan, kordhinta wareegga hawada, una oggolaato xayawaankaaga inay si raaxo leh u dhaqaaqaan oo ay u yareeyaan welwelka.
Boorsadeena xayawaanku waxay kaloo leedahay magacyo caan ah: boorsada bisada, boorsada eyga, side boorsada boorsada, boorsada socodka eeyga, bacda safarka eeyga, bacda daaweynta eeyga ...
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka dibada, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, bacaha qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo waxyaabaha kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:hcy@fofrerbag.com
1. Soo bandhigida alaabada boorsada xayawaanka:
â € ¢ [Naqshad la ballaarin karo] Boorsadaan xayawaanku waxay isticmaashaa naqshad dhabarka la ballaarin karo si ay u siiso xayawaankaaga meel nasasho oo dheeri ah, kordhinta wareegga hawada, una oggolaato xayawaankaaga inay si raaxo leh u dhaqaaqaan oo ay u yareeyaan welwelka.
â € ¢ [Hawo iyo muuqaal] 1. Dusha sare ee boorsada eyga waa la furi karaa si loogu oggolaado in xayawaankaagu uu madaxiisa u dheereeyo. Waad furi kartaa siibada dusha daboolka mesh si aad u horumariso neefsashada iyo aragtida, ama waad xirxi kartaa Gashaan sunshade-ka si looga hortago qorraxda 2. Naqshadda guddiga loo yaqaan 'acrylic board' oo saddex-geesood ah waxay bixisaa gudbinta iftiinka wanaagsan. Waxaa jira afar dalool hawo qaadasho oo ku taal bidix iyo midig + naqshadeynta mesh hawo si loo hubiyo wareegga hawada iyada oo aan kuleylka kululayn.
â € ¢ [Suunka garabka la hagaajin karo] Naqshadeynta ballaadhisay iyo garabka garabka la hagaajin karo ayaa gacan ka geysanaya yareynta culeyska iyo hagaajinta raaxada. Waxaa jira laba giraan oo lagalaaban karo dusha iyo hoose ee boorsada bisadda si looga hortago leexashada garabka garabka isla markaana loo ilaaliyo xasilloonida boorsada xayawaanka.
â € ¢ [Isticmaal adag oo raaxo leh oo laba-geesood ah oo hooseeya] Eeyga xambaara wuxuu leeyahay sagxad lakala bixi karo, oo la furi karo, wuxuuna leeyahay suuf jilicsan oo raaxo leh, taas oo u oggolaanaysa xayawaankaaga inay si raaxo leh u fadhiistaan ​​ama u seexdaan. Labada dhinacba waa la isticmaali karaa: suufka hoose wuxuu ka samaysan yahay gaaban dheer. Xilliga jiilaalka, xayawaanku gurigay joogi karaan si ay u kululaadaan oo u raaxaystaan; dhinaca kale waa naqshad maro Oxford ah, oo ku habboon xagaaga, qabow oo neefsan kara! Waa lagaa saari karaa oo gooni ayaa loo dhaqi karaa!
â € ¢ [Kaydinta iyo badbaadada] 1. Ka samaysan dhar tayo sare leh oo Oxford ah, biyo-diid ah, xoqista u adkaysata, bey'adda u fiican, aan sun lahayn oo aan xanaaq lahayn, taas oo u oggolaanaysa xayawaankaaga inay neefsadaan oo ay si xor ah u nastaan 2. Bacda xayawaanka dhinaceeda waxaa ku yaal laba bac oo lagu kaydiyo bacda qashinka, kuwa wax kala siiya iyo bacaha dhalada biyaha, iyo tan kale ee lagu keydiyo taleefannada gacanta, boorsooyinka iyo waxyaabaha kale ee yaryar. 3. Ku-dhex-dhex-jira ka-leexashada xarkaha badbaadada jillaab iyo jiinyeer ka-baxsiga si looga hortago in xayawaanku ka baxsadaan.
2. Boorsada xayawaanka parameters (specifications)
adeegyo dheeri ah
Waxaa loo habeyn karaa by OEM
Wax dhar ah
Biyo caddeyn ah Oxford maro
Maaddada waa loo beddeli karaa sidii loogu baahdo
Waxyaabaha ku jira maaddada
210 d dhar Oxford ah
Midabada kale waa la habeyn karaa
Dhererka 25cmX Width 27cmX Dhererka 40cm
Cabbirka ayaa loo habeyn karaa iyadoo la raacayo codsi
Hal shey oo ku jira bac balaastig ah oo loo yaqaan 'PE plastic bag', 10 halkii sanduuq
Xirxirida waxaa loo qaabeyn karaa si waafaqsan shuruudaha
OEM, ODM, wakaaladda Brand
Ikhtiyaar ikhtiyaar ah si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed
3. Warshad soo bandhigid toogasho dhab ah
4. Boorsada xayawaanka packaging and delivery
(1) Qaybaha iibka: 1.
(2) Xajmiga cabbirka ee caadiga ah: 0.045cm X42cm X 48cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) Faahfaahinta xirxirida: 59cm X 35m X 46cm.10PCS / box.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) FCL miisaanka guud: 9.2KG.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 8KG.
(6) Qaabka gaadiidka: badda, cirka iyo dhulka.Waxaan dooran doonaa qaabka ugu haboon ee saadka gaadiidka.
(7) Waxaan qaabeyn karnaa habka xamuulka ee keydinta xamuulka, laakiin tani waxay u hureysaa waxyaabo qaar, waxay sababi kartaa muuqaalka isbeddelka sheyga, guud ahaan kuma talineyno macaamiisha inay adeegsadaan qaabkan.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan u qaabeyn doonnaa habka xirxirashada boorsadaan ardayda dugsiga dhexe sida waafaqsan shuruudahaaga.
(9) Hadaad ubaahantahay shaybaarka shandadan iskuulka dhexe, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
5. Adeegga iibka kadib
(1) Waxaan si adag u xakameyn doonnaa tayada badeecadaha oo waxaan kuu soo gudbin doonnaa adiga oo leh boqolkiiba 100% u qalma.
(2) Waxaan sameyn doonnaa wax kasta oo macquul ah si aan kuu keydinno kharashyada adiga kugu baxa.
(3) Sanduuqa boostadayada shirkadu si joogto ah ayey waxtar u leedahay, shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee adeega macaamiishana, waad qori kartaa si aad ula tashato oo aad uga dacwooto wakhti kasta.Waan aqrin doonnaa oo ka jawaabi doonaa si hufan oo taxaddar leh.
(4) Ka dib iibinta muunadaha. Haddii nooca ugu horreeya u baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa shaybaarrada sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista nooca labaad ee shaybaarka waa gebi ahaanba lacag la'aan.
(5) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saar ee alaabooyinka amarka waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro wax soo saarka, si aad u ogaatid xaalada amarka si deg deg ah.
(6)Waxaan xiriiri doonaa 24 saacadood maalintii.Waxaan si hufan ula xiriiri doonaa si loo hubiyo isgaarsiinta habsami ee macluumaadka.
Q1:Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
J: Waxaan nahay soo saaraha bacaha Shiinaha, soo saaraha bacda ee Shiinaha, ma nihin ganacsade.
S2:Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
A: <= 1000USD, 100% bixinta kahor.
> = 1000USD, 30% T / T kahor, 70% gaarsiinta D / P
Q3aad. Waa maxay waqtigaaga hogaaminta ee wax soo saar ballaaran maalmo?
Jawaab: Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 500-1000 waa 30-35 maalmood.
Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 1000-3000 waa 35-40 maalmood.
Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 3000-5000 waa 40-45 maalmood.
Wareegga wax soo saarka ee alaabooyinka 5000-10000 waa 45-50 maalmood.
Wareegga wax soo saarka ee kor ku xusan waa in lagu hagaajiyaa iyadoo la eegayo heerka tiknoolajiyada wax soo saarka iyo dhibka alaabooyinka la qaabeeyey. Sawirada la bixiyay ama shaybaarada waa in la hubiyaa si loo go'aamiyo wareegga wax soo saarka saxda ah.
Q4. Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta shaybaarkaaga Ma siisaa shaybaar? Ma lacag la’aanbaa mise waa siyaado?
J: (1) Waxaan kuu soo bandhigi karnaa shaybaarro bilaash ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka bixiso khidmadda degdegga ah ee Shiinaha illaa waddankaaga.
(2) 7-10 maalmood oo shaqo oo shaybaarro la qaabeeyey ah iyo 48 saacadood oo tijaabada barta ah
Q5. Mudo intee le'eg ayay kugu qaadan doontaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
A: Waxaan kuugu soo jawaabi doonaa 4 saacadood gudahood ka dib marka aan helno iimaylkaaga baaritaanka.
S6:Oraah noocee ah ayaad aqbashaa Immisa maalmood ayaa lagu jiraa mudada oraahda?
Jawaab: (1) oraah sawir qaadis ah, xigasho sida ku xusan qoraalka nashqadeynta wax soo saarka, xigasho iyadoo la raacayo muunada la siiyay.
(2) Muddada oraahda ee sheyga keliya waa 12 saacadood, iyo muddada oraahda dufcaddu ay tahay 2-3 maalmood.
(3) Qaabka xigashada: sicirkii hore ee warshadda, FOB, CIF.
(4) Haddii aad u baahato oraah, fadlan la soco habka oraahda, taas oo noo suurta gelin karta inaan si fiican kuugu soo bandhigno.
Q7: Ma dooneysid naqshadeynta alaabtayada, miyaad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
J: Haa, waanu soo saari karnaa iyadoo loo eegayo sawirkaaga naqshadeynta ah.
Q8: Miyaad aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinta tijaabada alaabta? Sidee ku saabsan tayada wax soo saarkaaga?
J: Haa, waanu aqbalnaa kormeerka dhinac saddexaad.
(2) Waxay bixin kartaa warbixinta baaritaanka badeecada.
(3) Waxaan nahay soo saaraha bacaha iskuulka Disney, boorsooyinka Wal-Mart iyo Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarkeena.
S9: Waa maxay awooddaada wax soo saar tiro badan?
J: (1) Waxsoosaarkeena maalinlaha ah ee boorsooyinka fudud waa 50,000, waxsoosaarka billaha waa 1.5 milyan.
(2) howshu waa soosaaris adag oo maalinle ah oo 3000, 100,000 soosaar bille ah.
S10: Ma leedahay amarka ugu yar?
J: Haa, waxay kuxirantahay heerka farsamada gacanta iyo tirada alaabtaada.
Q11: Miyaad aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinta tijaabada alaabta? Sidee ku saabsan tayada wax soo saarkaaga?
J: (1) Haa, waxaan aqbalnaa kormeerka dhinac saddexaad.
Calaamadaha kulul: Boorsada xayawaanka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka
Daboolida Eyga daboolka gaariga
 Dabaqa 3aad, No.187 Xinyi Wadada, Beesha Jilian, Magaalada Qiaotou, Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong
Right Copyright 2020-2021 Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.